सशस्त्रको बढुवा रोक्ने को ? यस्तो छ चलखेल | Diyopost
सशस्त्रको बढुवा रोक्ने को ? यस्तो छ चलखेल
काठमाडौं, कार्तिक १९ । सशस्त्र प्रहरी बलमा दरबन्दी खाली भएर पनि ९ महिनासम्म एसएसपीबाट डीआईजी बढुवा रोकिन पुग्यो । मिडियामा ब्यापक रुपमा कुरा उठेपछि डीआईजी बढुवा भयो । तर कानुन, लेखा, स्वास्थ्य र इन्जीनियरिङतर्फको एसएसपीलगायतकम पदहरुको बढुवा १८ महिनादेखि हुन सकेको छैन ।
जसका कारण धेरै त बढुवा नै नभई अवकाशमा पर्ने चिन्तामा छन् । सोमबारको साँघु साप्ताहिकमा खबर छ,–सशस्त्रको कानुन, लेखा, स्वास्थ्य र इन्जीनियरीङतर्फको बढुवाका लागि आइजीपी शैलेन्द्र खनालले ठूलै रकम माग गरेको र त्यो नदिएपछि बढुवा नै रोकेको आरोप छ । बढुवा अधिकार भएकाले किन घुस दिने भनेर नदिएपछि उनले प्रतिशोध सांधेर रोकेका छन् ।
डीआइजी बढुवा रोकेको बारेमा समाचार आएपनि कानुन, लेखा, स्वास्थ्य र इन्जीनियरिङको बढुवा रोकिएकोबारेमा मिडियाको ध्यान पनि जान नसकेपछि आफ्नो पीडा भित्रभित्रै गुम्स्याएर काम गर्दै आएका छन् ।
यसैबीच सशस्त्रमा डीआइजी सरुवाको तयारी भएको छ । आइजीपी खनालले २ नं. प्रदेशका डीआइजी कविन्द्रमान श्रेष्ठलाई १ वर्ष पुगेको भनि तानेर त्यो ठाउँमा उनका अति निकट सचिवालयका डीआइजी सुरजकुमार श्रेष्ठलाई पठाउने तयारी गरिसकेका छन् ।